Xulashada sifooyinka, AutoCAD - Microstation - Geofumadas
Xulashada sifooyinka, AutoCAD - Microstation
Mee, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Xulashada sifooyinka waa hab lagu shaandheynayo walxaha si waafaqsan shuruudaha gaarka ah, Microstation iyo AutoCAD labadaba si isku mid ah ayey u sameeyaan inkasta oo mid ka mid ah labada barnaamijka uu leeyahay qaabab dheeraad ah, marka laga hadlayo qalabkani. Waxaan u isticmaalayaa tusaalahan AutoCAD 2009 y Microstation V8i.
Tani waxay la shaqeysaa amarka qelect, ama la socota astaanta u taal dhinaca midig ee guddiga dhinaca guryaha.
In AutoCAD 2009 waa inaad u fiirsataa, waa habboonaanta isticmaalka farsamada, adoo doortay tabka guriga.
Markii la doorto, guddi ayaa lagu soo bandhigaa kuwaa oo u ogolaanaya:
-Xulo xulashada sawirka oo dhan ama keliya xulashada qayb ahaan
- Xulo nooca shayga (xariiq, goobaab, qoraalo, iwm.)
-Defin xaaladda xaaladda ciyaarta iyadoo la adeegsanayo shirkadaha
-Filterka midabka, u calaamadee sida qiimaha
Ka dibna waxaa suurtogal ah in lagu daro xulashada qaab cusub ama ururinta hadda jirta.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale u muuqataa mid wax ku ool ah in la doorto sheyga miiska guryaha, inkasta oo aysan haysan wax badan oo ujeeddadan ah, inta badan waa wax ku habboon xulashada walxaha hore loo soo doortay ee isku nooc ah.
Waxa kale oo jira noocyo kale oo xulasho, kuwaas oo dhacaya in hadda la Ribbon I si fudud u ma heli. Laakiin waxaad ka soo qaadan kartaa miiska amarka, gali amarka "dooro", ka dibna gal, ka dibna calaamadda?, Ka dibna geli. Tani waxay na siin doontaa noocyada kale ee xulashada in AutoCAD leeyahay inkasta oo aysan aheyn sifooyin, waxay faa'iido leeyihiin. Inkasta oo la isbarbardhigayo waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la tixgeliyo waxa Microstation uu ku sameeyo xulashada elementa.
Amarkan waxaa loo adeegsadaa "edow / xulo sifooyin".
Inkasta oo gudigu uu la mid yahay AutoCAD waxaa jira waxyaabo badan oo la kala dooran karo sida xulashada:
- Isku-xirnaansho heerar (lakabyo), tani waxay la shaqaysaa dariiq fudud ama isticmaalkeeda ctrl o wareeg.
- Noocyada waxay ku dhow yihiin isla sida AutoCAD, inkasta oo ay u ogolaato noocyada 22 ee ka dhanka ah 12, kaas oo u ogolaanaya. Sidoo kale, xulashada waxay noqon kartaa jiiditaanka sahlan, waxaana jiri karta dhowr nooc isla waqti isku mid ah halka AutoCAD ay tahay mid kaliya hal mar. Sidaa awgeed, AutoCAD waxay isticmaashaa shaqeynta waxyaabaha lagu daray ururinta.
-Waxaa suurtogal ah in la sifeeyo xogta calaamadaha, marka kayska AutoCAD kaliya u ogolaado midabka, Microstation waxay u ogolaataa qaabka iyo dhumucda qadka.
-In lagu daro ama laga saaro guryaha, labadaba waa isku mid
-Waxaa xiiso leh hal doorasho oo dheeraad ah oo aad dooran karto walxaha, ama raadi, taas oo ay kudhowaan meelo ay ka mid yihiin sheyga ama muujinayaan.
- Markaa waxaa jira ikhtiyaarka lagu dooranayo haddii ay joogaan ama ku jiraan (on / off)
-Waxbarashada "kicinta" ayaa fulineysa ficilka, isla mar ahaantaana waxaa jira labo badh aad u badan oo u oggolaanaya inaad aragto guryaha kale ee shaandhaynta
- Shuruudaha hawlgalka waxay yihiin sida AutoCAD (u siman, waaweyn, yar yar iwm) waxaana lagu fuliyaa badhanka hoose "tags", Laakiin marka la eego shuruudaha dhowr ah ayaa lagu dari karaa waqti isku mid ah iyadoo la isticmaalayo wadayaasha"iyo, ama"
Iyo in chascada, taas oo aad u fiican, in "qalabka / xulashada ka soo jeeda"Waxaad dooran kartaa sifooyinka saxda ah ee sheyga ee sawirka. Tani waa wax macquul ah sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa haddii aad rabto inaad doorato dhammaan walxaha leh hanti gaar ah; waa sahlan tahay sababtoo ah halkii laga yaabo in la qiimeeyo midka la doorto kadibna waxaa lagu kordhin karaa noocyo badan oo shay ah ama lagu daro shuruudo kale.
Waxaad sidoo kale u kaydin kartaa shuruudaha faylka .rsc oo wici kartaa waqti kale.
Kadibna Xayeysiisyada ayaa kuu sheegi kara shuruudaha kale ee ka midka ah sida xarumaha font ama magacyada xayawaanka (unugyada)
Isku mid ah labada barnaamijyo, arrin ah in loo adeegsado in ay ka faa'iideystaan ​​ama xanuunsadaan. Way fiicnaan laheyd haddii AutoCAD ay wanaajiso shaqadan.
Post Previous«Previous Nidaaminta hababka wanaagsan
Post Next Geofumadas, niyad jabka ahNext »
3 Jawaab ah "Selection by attributes, AutoCAD - Microstation"
Waxaan u maleynayaa in Microstation J uu sameeyay shaandheyn la mid ah. In kasta oo aanan haysan si aan isugu dayo.
Hector Aguilar isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayey inaan ku xereeyo microstation j, laakiin ma heli karo habka aan u sameeyo, waxa aan u baahanahay waa in aan soo saaro qoraallada ama qashinka
Maqaalka ugu wanaagsan, waxaa lagula taliyay kuwa isticmaala kuwaas oo ka yimid Autocad ilaa Microstation.